Soo Kordhinta Xayeysiinta Mobilada | Martech Zone
Sabtida, Oktoobar 1, 2011 Axad, Oktoobar 4, 2015 Adam Yar
In ka badan 1 milyan oo qalab iOS iyo Android ah ayaa hawlgalay maalin kasta! Waxaa jira sabab aan waqtiga ugu badan ugu lumino Suuqgeynta Mobilka. Maaha tirooyinka tirada badan, sidoo kale. Dabeecadda macaamiisha iyo ganacsiyada ayaa is beddelaysa - annaga akhri emaylkeena aaladaha moobaylka hadda. Waxaan baarnaa shirkadaha inta aan sugeyno duulimaadka xiga. Waxaan kaqeyb qaadanaa warbaahinta bulshada iyo adeegyada juquraafiga maalin kasta mahadnaqa mobilada.
Sida isbeddelka kasta ee tikniyoolajiyadda… waxaan u daawanaa sida korsashada ay ula socoto suuqgeynta. Microsoft Tag ayaa isku soo duba riday xogtan kor u kaca iyo dhicitaanka xayeysiinta - malee halka uu kobcintu ku taal? Kuwa hore u korsada waxay ku guuleystaan ​​faa'iidooyin ballaaran xagga suuq-geynta suuqa, kuwa aan qaadan kororka gadaal ayey uga dhacaan… badankood gebi ahaanba wey ku fashilmaan.
Fiiro gaar ah: Codbixinteenna Zoomerang toddobaadkan waxay taabanayaan tan ... ma boggaaga ayaa xitaa loo habeeyay aaladaha moobaylka?
Xayeysiinta moobiilka iyo kuwa waddaniga ah ayaa kasbanaya caan ka mid ah. Iyada oo adeegsadayaal badan oo ka tirsan baraha bulshada ay koontadooda ku hubinayaan aaladaha moobaylka marka loo eego kombuyuutarradooda, xayaysiisyada moobiilka ee durdurku si dhakhso leh ayey u noqonayaan habka ay xayeysiiyayaashu u doorteen farriintooda hore iyo bartamaha. Infographic-kaani wuxuu si qoto dheer u eegayaa kor u kaca xayeysiinta moobiilka iyo kuwa waddaniga ah wuxuuna bixiyaa saadaalin mustaqbalka ah.